Maitiro ekuchinjisa yako Hutano data kune idzva iPhone | IPhone nhau
Maitiro ekuchinjisa yako Hutano data kune iyo nyowani iPhone isina kudzorera
Iyo iOS backup yakanaka asi ... Ko kana chinhu chega chatinoda kuendesa kuchinhu chedu chitsva data rehutano pasina kudzorera backup?, mhinduro yacho iri nyore kupfuura painonzwika. Kana isu tawana iyo iPhone nyowani isu tinowanzofarira kutanga kubva pakutanga, tisina kuisa backup makopi, kunakidzwa neIOS ruzivo seyakachena uye yakagadzikana sezvinobvira, pasina kudhonza matambudziko apfuura kana nekuda kwekuti isu tinoda kupokana nedhizaini yedu nyowani isu tichigadzirisa iyo system yese uye kurodha mafomu edu. Nekudaro, nekuda kwechirongwa chitsva tichakwanisa kuendesa ruzivo rwedu rwehutano pasina kushandisa kopi yekuchengetedza ye iPhone uye nekudaro, pasina kudhonza data ratisingade, izvi chete.
Chirongwa ichi chinonzi Decipher chiitiko chekuchinjisa uye chishandiso chemahara cheOS X neWindows, iyo inotibvumidza kutora chete Hutano uye Zvekuita dhata kubva kubhegi ratakachengeta muTunes nenzira yakavharidzirwa yekuzowedzerazve iyi data kune nyowani iPhone mudziyo pasina mamwe matambudziko ado. . Pfungwa ndeyekuti tinogona kushandisa chishandiso kumisikidza iyo chete data, uye nekukwanisa kusiya rese redu idzva iPhone kana iPhone yakadzoreredzwa yakachena. Nekudaro, pane izvi isu tichazoda iyo Apple Watch uye negadziriro yeparutivi, nekuti iyi data yekuchinjisa inonyanya kubatsira kune avo vanoshandisa iyo Apple Watch uye vane hombe hombe yehutano data yakachengetwa mairi.
Dhawunirodha chirongwa kubva IZVI link
Sungisa Apple yako Watch (iyo ichagadzira backup yehutano hwako data).
Unganidza yako iPhone ku iTunes uye gadzira yakavharidzirwa backup.
Vhara iTunes mushure mekuteedzera uye kuvhura iyo yakadzingwa application.
Dzvanya kuenderera mberi nekutamisa, sarudza iyo faira iwe yaunoda kuendesa uye tinya pa "decrypt".
Iye zvino iyo Hutano application ine iyo data, kuti iwe ugone kuwiriranisa zvakare Apple Watch iyo iwe yausina kubatika kubva yapfuura iPhone.
Iwe unogona ikozvino kunakidzwa neyako ese Hutano data.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuchinjisa yako Hutano data kune iyo nyowani iPhone isina kudzorera
Ini ndanonoka nemazuva maviri, zvinonyadzisa, ndakavabvunza kuchitoro cheApple uye ivo havana kuziva kuzviita, ini ndakatobvisa zvese zvinyorwa zveApple Watch nevamwe. Zvakadaro ndinokutendai zvikuru nemupiro.
Paloma Maria akadaro
Kupusa zvakare kuti Apple inoita kuti tishandire kune aya marudzi eanotyisa matanho pane kupa mhinduro iri nyore
Pindura kuna Paloma Maria
Maitiro ekubvisa midzi zvitupa kubva kune yako iPhone kana iPad
Beddit, iyo yekurara yekutarisa yawanga uchitsvaga